Xafladii Dowlada Cusub ee Magaalada Minneapolis lagu Qabtay.
Xarunta weyn ee convention Center in Minneapolis
Waxa si farxadle looga soo dhaweeyey labada magaale ee mataanaha ah ( ST Paul iyo Minneapolis) doorashadii sida cadaalada ku dhacdey ee lagu doortay madaxweynaha Somaliya Mudane Abdulahi Yusuf Ahmed. Xafladaas waxa ka soo qayb galay mas’uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin kuwa u dhashay wadanka Mareynkanaka iyo Somalida degan gobolka Minnesota, dadkaas oo tiradoodu lagu qiyaasay in kabadan toban kun oo qof. waxayna u dhacdey sidatan:
Idaacada la daawado (TV)
Waxa goobtii xafladu ka dhacdey hadheeyey wariyayaasha gobolka Minnesota oo halkaa ka qaadayey sawirada iyo cododka dadkii ka soo qaybgalay xafladaas. Markii xafladu dhamaateyna ka baahiyey idaacadaha ka baxa gobolka Minnesota. Idaacada ugu weyn ee dadku aadka u xiiseeyaan laaguna magacaabo Somali Show TV ayaa waxa ay u soo daysay barnaamijkaa halkaa ka dhacay isla maalin nimadii jimcaha, halkaas oo si weyn looga daawadey sidii xaflada u dhacaday. Barnaamijkaa ayaa waxa xiriirinayay wariyaasha caanka ah ee gobolka Minnesota, Abdimalik Askar iyo Zakariye Adand.
Waxgaradka Gobolka Minnesota
Waxa halkaa qudbado qurux badan oo isdaba jooga ka jeediyey waayeelka degan gobalka Minnesota. Qudbadii ugu horeysay ayaa waxa hadalaka qaatey Maxamed Askar, oo sideetan jir ah. Waxana uu xasuusiyey in maanta ay la mid tahay maalintii calanka la qaatay oo kale. Waxa uuna guubaabo weyn u soo jeediyey Soomaalida degan gobalka Minnesota, isagoo odhanayey “ Waa in aan taageernaa dowlada u dhalatay Soomaaliya maanta haday noqon lahayd xag dhaqaale, xag waxbarasho oo aanu ku tabarucnaa waqtigeena sidii aanu wax ula qaban lahayn”. Waxa kale oo uu xusay kana sheekeeyey waxa ay xoriyadu tahay iyo sida ay muhiim u tahay in la dhowro lana difaaco. Markuu Maxamed Askar dhameeyay ayaa waxa hadalkii qaatay mudane Qaac oo dadkii halkaa yimid u jeediyey qudbad xiiso leh kuna dheehneyd Somalinimo iyo wadannimo jeceyl. Waxa isgana halkaa ka hadley Rasto oo ku qudbadeeyey afka Mayga. Qudbadiisuna waxa ay ku dheehneed sidii loo soo celin lahaa midnamadii Soomaaliya iyo kal dambeyntii. Laguma soo koobi karo dadkii halakaas ka wada hadley, waayo qudbad walba waxa ay ka hadleysey muhiimada Somalinimada waxa ay tahay iyo tahniyado loo dirayey madaxweynaha Somaliya Mudane Abbdulahi Yusuf Ahmed.
Haweenka Magaalad Mineapolis
Haweenka degan gobalka Minnesota ayaan u kala harin ka qayb galkii xaflada lagu soo dhaweynayo dowlada cusub. Waxayna u diyaariyeen buraanbur ay ugu tala galayn madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Abdulahi Yusuf Ahmed. Waxayna goobtaas ka jeediyeen sedex buraanbur oo cusub. Intii buraanburka socday ayaa waxa aan meesha ka maqneyn gabdhaha degan gobalaka Minnesota oo isla goobta ku ciyaarayey cayaarta buraanburka. Taasoo dadkii halkaa ka soo qayb galay gilgishay shacuurtoodii ku dheehneyd dowlada cusub ee u dhalatay Soomaaliya. Dhamaan haweenka wajigooda ayaa waxa ka muuqatay reynreyn ay ku dheehan tahay farxad.
Ardada Gobalka Minnesota
Ardeyda dhigata dugsiyada sare, jaamacadaha iyo kuwa dhigta kuliyadahA ayaa halkaa waxa ay ka jeediyeen qudbado xasaasiya oo dadka qaarkood u riyaaqeen. Waxana ay qaarkood sheegeen in ay ka yimaadeen Soomaaliya cisha dhaweyd oo ay ku soo arkeen sedex wax yaalood oo kale ah:
1- Hooyo albaabka ku garaaceysa guri aysan aqoon, oo oraneysa wax cuna ah ma idanka soo hareen aan ciyaalka siisto.
2- Hadaad rabto in aad aado magaalo kale oo aadan u dhalan, waa in aad ka xaysataa dad u dhashay magaaldaas oo ku ilaaliya.
3- Waxbarasho la’aan dhab ah.
Madaxda gobalka Minnesota
Xaflada kaliya ma aysan u dabaaldageyn Somlida balse waxa halkaas la faraxsanaa madaxda goblaka Minnesota kuwaasoo ay isgu jireen noocyo badan. Waxa ugu horeeyey oo hadalaka qaatay duqa magaalada Minneapolis oo ku furey hadalkiisa afsoomaali isgoo yiri “Awguuriyo Somaliya”. Waxa uuna u sheegay Soomaalida in ay dowlada taageeraan gacan buuxdana siiyaan. Gebogabadiina xasuusiyey Soomaalidu in ay doorashada Mareynkanka ee dhacaysa bisha soo socota ka qayb qaataan sidii ay u dooran lahaayeen Madaxweynahooda halkan. Waxa kale oo halkaa ka hadlay mas’uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin Madowga Mareynkanka oo u sheegay Soomaalida in ay isla dhasheen, oo ay ka wada yimaadeen hal qaarad oo qura. Wadanka Mareynkankana la keenay afar boqol oo sano ka hor. Haddana ay diyaar u yihiin sidii ay walaalahooda Soomaalida ay u garab istaagi lahaayeen. Iyagoo hambalyo aan kala go laheyn u dirayey madaxweynaha cusub ee Somaliya Mudane Abdulahi Yusuf Ahmed.
Culimada Gobolka Minnesota
Waxa ayaadu quraan ah ku furay mid ka mid wadaada sida weyn looga qiimeeyo magaalada Mineapolis. Ka dibna waxa si qurux badan wacyi ka soo jeediyey halkaas Abdisalan Adan oo ah sheeq aad loo xishmeeyo. Abdisalaan waxa uu yiri “ Maanta way dhamaatey su’aashii aanu in badan jawaabta u weyney ee ahayd Soomaaliya Madaxweyne ma laha. Isaga oo hadalaka sii wata ayaa waxa uu yiri waxa aan macalin ka ahay iskuulada goblka Minnesota, marwalbana waxa caruurta Soomaalidu i weydiiyaan madaxweyne anagu ma leenahay, wax aan ku jawaabnana uma aanu heyn su’aashaas, laakiin maanta waxa ka dambeeya madaxweynuhu waa Mudane Abdulahi Yusuf Ahmed.
Fanaaniinta Gobolka Minnesota.
Fanaaniinta gobolka Minnesota ayaa waxa ay isku soo duba rideen barnaamij loogu dabaaldagayey dowlada cusub iyo tahniyada madaxweynaha Soomaaliya Mudane Abdulahi Yusuf Ahmed. Fanaaniinta halkaa goobjoog ku ahaa waxa horkacayey Sangub isgoo oo curiyey labo heesood oo ay ku luuqeynayeen Saado Ali Warsame iyo Cigaal. Fanaaniintaas ayaa waxa ay badankoodu ka soo jeedeen kooxdii la oran jirey Waaberi, balse waxa halkaa ku dhamaa fanaaniinta gobolka oo dhan. Inkastoo oo waqtigu ku yaraadey hadana waxa ay dhigeyn wax aan hore looga baran marka ay masraxa yimaadaan. Dadweynaha ka soo qayb galay xafladaas ayaa fanaaniintu ka ilmeysiiyeen sidii qiirada laheyd ee ay ugu luuqeynayeen heesaha isdaba jog ah. Heesahaas waxa ka mid ahaa Toosooy Toosooy isku tiirsada iyo maanta maanta waa maalin weyne maanta oo ay ku luuqeyneysay fanaanada caanka ah ee gobalka Minnesota Cadar kaahin.
Xafladan ayaa waxa ay ahayd mid taariikhda baal dahaba ka gashey dhamaan umada Somaliyeed ee degan goblka Minnesota ay xusuusan doonaan. Xafladan ayaa waxa ay tahniyad buuxda u dirtey Mudane Abdulahi yasuf Ahmed iyo baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Dhamaan dadkii ka soo qaybgaly barnaamijka ayaa u mahad celiyey dadkii soo abaabuley barnaamijkan quruxda badan. Ugu dambeyntii ayaa halkaa lagu duceeyey in Alle dowladan ka dhigo mid Soomaaliya u horseeda NABAD IYO CAANO.
Dr. Abdimalik Askar